ကလေးများ၏ပညာရေးဆိုင်ရာဂီတတူရိယာအရုပ်စန္ဒရားနှင့်တေးဂီတသေတ္တာ - အခမဲ့သင်္ဘောတင်ခနှင့်အခွန်ကောက်ခံခြင်းမဝယ်ပါနှင့် WoopShop®
အရောင်အမည် ပြာသော စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင် ဝါသော
ပြာသော စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင် ဝါသော
ကလေးများအတွက်ပညာရေးဂီတတူရိယာကစားစရာစန္ဒရားနှင့်ဂီတသေတ္တာ - အပြာရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသက်အရွယ် Range: 2-4 နှစ်များ
စန္ဒယားစကေး Knock: 8 ကြေးခွံ
ကစားစရာ Keyboard ကိုအမျိုးအစား: မွေးကင်းစကလေးသရုပ်ပြခြင်းအမျိုးအစား
အမျိုးအစား: keyboard ကို
ကလေးများအတွက် Unisex Toy ဂီတတူရိယာ
feature ကို: တူရိယာကစားစရာတိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးစန္ဒရား ဂီတပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာ,ကလေးများအတွက်ကစားစရာများ
schnelle Lieferung ။ alles ist အူ။ Ich empfehle es weiter
ငါတူမကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကအဓိကအချက်ပဲ။ အရည်အသွေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားစရာညစာ ၁၁/၂၁/၁၉ တွင်မှာယူခဲ့ပြီး ၁၂/၁၂/၁၉ တွင်အလွန်လျင်မြန်စွာရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ! ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရောင်းချသူမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြွယ်ဝချမ်းသာသောစီးပွားရေး!
စူပါအစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း။ အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေစတိုးဆိုင်။ ကျိန်းသေကအကြံပြု!